KALSHAALE: Afar Qof Oo Ku Dhintay Dagaal Dhex Maray Beelaha Buuhoodle Iyo Qori-lugud, Doorka Khaatumo Iyo Baaqa Nabadeed Ee Burco Laga Direy | Saxil News Network
KALSHAALE: Afar Qof Oo Ku Dhintay Dagaal Dhex Maray Beelaha Buuhoodle Iyo Qori-lugud, Doorka Khaatumo Iyo Baaqa Nabadeed Ee Burco Laga Direy
February 28, 2015 - Written by admin
Inta la ogyahay afar qof ayaa siyaabo kala duwan ugu geeriyooday iska hor imaad deegaanka Galgal oo koonfur-galbeed kaga beegan tuulada Kalshaale shalay ku dhex maray dad xoolo dhaqato ah oo ka soo kala jeeda beelaha Buuhoodle iyo Qori-lugud.
Sida la sheegay dagaalkan ayaa bilaabay ka dib markii Maleeshiyaad ka soo jeeda beesha Cigaal Naaleeye ee Dhulbahante ay toogasho ku dileen Marxuum reer Qori-lugud ah oo ku sugnaa deegaankaasi. Hasa-yeeshee waxa talo faraha ka baxday markii beesha Qori-lugud oo isku dayday inay si nabadgalyo ah ku soo qaataan Maydka Marxuumka halkaasi ku dhintay lagu soo qaaday weerar sababay geerida saddex Marxuum oo reer Qori-lugud ah. Waxaana markaasi ka dib halkaasi ka bilaabmay dagaal muddo kooban socday, kaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo beesha Buuhoodle ah, laakiin dagaalkaasi markii dambe si iskii ah ayuu u istaagay inkasta oo ilaa Makhribkii shalay xabaddu u dhacaysay si teel teel ah.
Ilaa hadda lama oga sababta dhabta ah ee loo dilay Marxuumka geeridiisa uu dagaalku ka dhashay, laakiin Kayse Cabdi Yuusuf oo mar ahaa Wasiiru-dawlaha nabadeynta ee gobollada bariga Somaliland, imikana ka mid ah kooxda Khaatumo ayaa xalay Warbaahintooda u sheegay in dagaalka dhex maray beelaha Buuhoodle iyo Qori-lugud uu qayb ka yahay dagaallo uu sheegay inay Khaatumo ka waddo deegaannada ay sheeganayso “Dagaalkani waa dagaal silsilad ah oo la qorsheeyay, waxaanu daba socdaa dagaalkii Horu-fadhi ka dhacay 18-kii bishan, dagaalkaasi hadduu dhacayna guul” ayuu yidhi, Kayse Cabdi Yuusuf, waxaanu intaasi ku daray oo uu ku dooday in beeshiisa lagaga horeeyay dagaalka.
Dagaalkan oo xaalad cakiran ka abuuray deegaannada Buuhoodle iyo Qori-lugud oo aan horeba isugu calool fayoobayn, ayaa waxa ka hadlay Xildhibaan Muuse Xaaji Aaden Ducaale oo ka mid ah Mudanayaasha Golaha Guurtida Somaliland isla-markaana ka soo jeeda deegaanka Qori-lugud.
Xildhibaanka oo xalay la soo xidhiidhay Wargeyska Somalilandtoday isagoo ku sugan Magaalada Burco, ayaa ku baaqey nabadgalyo iyo dagaalka la joojiyo “Baaqa aan dirayaa waxa weeyaan oo aan leeyahay Khasaaruhu wuu dhacay ee aynu intaa isku hor taagno, waayo wixii kale ee halkaa loo dhaafaa waa Khasaare iyo dhibka oo sii kordha. Labada dhinacba waan Tacsiyeynayaa” ayuu yidhi, waxaanu intaasi ku daray “Labada dhinacba waa labadeydii gacmood, waxaan leeyahay nabadda idinkaa ku seexda ee Khasaaruhu halkaa ha inoo joogo. Wixii dhibaatadaa abaabuleyna ILAAHAY baa ka abaal-marinaya, waxaanuna rajeynaynaa in dhibkaasi noqdo kii inoogu dambeeyay”
Dagaalkan ayaa kala dhantaalaya dedaallo nabadeed oo ay bilihii u dambeeyay wadeen Madax-dhaqameedka iyo waxgaradka beelaha Buuhoodle iyo Qori-lugud. Waxaana muuqanaysa in kooxda nabad-diidka ah ee Khaatumo wado qorshayaal ay ku carqaladeynayso geedi-socodka nabadeed.